Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कतै पद फालाफाल, कतै हाँसको चाल - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, माघ २१ : केपी ओलीको ओँठे जवाफको भर पर्दापर्दै पार्टी औपचारिक विभाजनमा जानुपर्ने स्थितिमा पुगिरहेको बेला प्रचण्डकै मुखबाट केपीशैलीमा जवाफ निस्किएपछि केही नेताले अचम्म मानेका छन् ।
अस्ति सोमबार पेरिसडाँडामा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहँदा पूर्वएमालेतर्फका नेता डा.विजय पौडेल जुरुक्क उठे । त्यसबेला अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्षता ग्रहण गर्दै मन्तव्य दिइरहेका थिए । डा. विजय तलैबाट बोल्न थाले, ‘तपाईंहरूले सहमति जुटाउन नसकेको वा अरु केही समस्या परेको हो ? महासचिवबिना बैठक कसरी बसिन्छ ? त्यसैले यही बैठकबाट महासचिव छानौँ । यसरी कति दिन चल्छ ?’ विजय बोलिसकेर थचक्क बसे ।
कानुन व्यवसायी संगठन र पेशागत जिल्ला कमिटी मात्रै हो, प्रचण्ड–माधव समूहसँग संयोजक र सहसंयोजक साथ रहेको । बाँकी सबै जनसंगठनमा कि संयोजक कि सहसंयोजक छैनन् । ओली पक्षले चाहिँ जुन–जुन जिल्ला र जनसंगठनमा यस्तो रिक्तता व्यहो¥यो, ती–ती ठाउँमा आफ्ना मान्छे तोकिसकेको छ । पेरिसडाँडास्रोतका अनुसार सामान्यतया सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटनबारेको फैसला नआउञ्जेल यस्तै स्थिति राख्ने नीति बनाइएको छ ।
तर, काम नै ठप्प हुने गरी भएका रिक्ततालाई मेट्नचाहिँ आजभोलिमै स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ । केपी समूहको चातुर्यता कस्तो छ भने, बीचमा रहेका मान्छेहरू आफूतिर खुल्नासाथ हत्तपत्त कामको जिम्मा दिने र तिनलाई एक्सपोज पनि गरिहाल्ने । फलतः त्यो मान्छे लाजले पनि फर्किएर अर्को समूहमा जाँदैन ।
जस्तो, पुस ५ को कदमलगत्तैका भेला, बैठकमा प्रभु साह, दावा तामाङहरू प्रचण्ड–माधव समूहतिर देखिएका थिए । तर, जब मन्त्री पाउने भए, केपीकहाँ दौडिहाले । र, त्यताबाट तुरुन्तै मन्त्री बनाइहालियो ।
गौरीशंकर चौधरी पूर्वमाओवादी भए पनि प्रचण्डतिर गएका थिएनन् । उनलाई पनि गइहाल्छन् कि भनेर स्वाट्टै मन्त्री बनाइयो । त्यस्तै, ओली खेमा छोडेर कञ्चनपुरबाट पूर्वमाओवादीतर्फका विक्रमबहादुर शाही प्रचण्डतिर फर्किएका छन् । खोटाङका प्रदेश सांसद (पूर्वएमाले) राजन राई लामो समय तटस्थ बसेर प्रचण्ड–माधवतिर पुगेका छन् ।
पहिला प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनमा यिनै राजनले मतपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मत बदर गराएपछि शेरधन राईले दुई भोटबाट भीम आचार्यलाई हराएका थिए । अहिले फेरि त्यही प्रदेशमा शेरधनविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
भीम आचार्यलाई पूर्वएमालेका तीन सांसद भए पुग्ने स्थिति छ । यस्तोमा विगतमा शेरधन जिताउन मत बदर गराउने राजन भीम भएतिरै पुग्दा भीमको भर बढेको छ । आजकोजनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।